अविरल वर्षाले कुन कुन राजमार्ग ठप्प ? « Pahilo News
अविरल वर्षाले कुन कुन राजमार्ग ठप्प ?
प्रकाशित मिति : 12 July, 2018 12:34 pm
काठमाडौ, २८ असार । निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण खोलामा बाढी आउनाका साथै पहिरो र सडक भत्किएर विभिन्न राजमार्गहरु अवरुद्ध भएका छन । बुधबार बेलुकादेखि निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण खोलामा बाढी आउनाका साथै पाखा भित्तामा कान्ला भत्किएर अरनिको र बिपी राजमार्गका केही ठाउँमा अवरोध आएकाले दुवै राजमार्ग ठप्प छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख सुनिलजंग शाहका अनुसार बनेपाको पुण्यमाता खोलामा आएको बाढीका कारण बनेपाको पुलबजार डुबानमा परेको छ । यसबाट अरनिको राजमार्ग करीब तीन घण्टादेखि ठप्प छ । बाढीका कारण खोला छेउछाउका बजार क्षेत्रका घर, पसल र टहरा डुबानमा परेको शाहले बताए । मानवीय क्षति नभए पनि खोला बढेका कारण यातायातको कुनै पनि साधन चल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने हेटौँडा– कुलेखानी सडकखण्डमा पर्ने इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–४ बुरुण्डीस्थित फाखेलको सडक र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–७ स्थित सिस्नेरीको सूर्यडाँडामा आज बिहान परेको वर्षाले हेटौँडा काठमाडौँतर्फको यातायात दुवैतर्फ बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीखण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ ।
यसैबीच अविरल वर्षासँंगै सडक माथिबाट खसेको पहिराका कारण गए रातिदेखि पोखरा–बागलुङ सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ ।